Lakkadhaawwan dhangii lakoofsaa
Dhangiin lakkaddaa mahaallaqootaa whaala[&xxx-nnn] fayyadama, haallaqaa fi'nnn'n lakkadda biyyaati.Mallaattowwan addayaa hojiin mahaallaqaa, kanneen hin barbaadu. Dhangiin mahaallaqaa afaan irratti hin hundaa'u kan ati sanduuqa Afaanii keessaa filtu.
Lakkaddoonni marri hiika guutuu bu'aawwan afaan maraa hin kennani.
Fakkeenyaaf, Yoo mosaajjiin kee gitoo biyya Ingiliffaa ta'e, fi yoo waggaa gara qubo-afreettii dhangeessuu barbaadde, YYYY akka lakkada dhangeessuutti galchuu dandeessa. Gara gitoo Germanitti yoo jijjiirtu, JJJJ fayyadamuu qabdu. Gabateen armaan gadii garaagarummaa naanna'e tarreessa.
Guuyyaa Torrban Keessaa
akkasuma lookeellota tarreefaman miti
Jarmanii - ja
Neezeerlaandii - ne
Faransaayi - fa
Xaaliiyaanii - xa
Poorchugaal - pt
Ispeenii - es
Daaniishii - da
Norwegiiyaan - no, nb, nn
Suwidinii - sw
Fiinlaandii - fn
Fooyyii[Nat Num] fayyaayyadamuun bara agarsiisuun galtee adda addaa qaba kan akakuuwwan lakkoofsa biroo caala.Galteewwan kun'CAL:dhaan agarsiifamaniru.Fakkeenyaaf, CAL: 1/4/4'kan agarsiisu waggaan fooyyii [Nat Num1] fayyadamuun agarsiifama,wayita guyyaa fi Jiinni fooyyii [Nat Num] fayyadamuun agarsiifamu yoo 'CAL' hin iftootne,dhagiiwwan baraa fooyyii murtaa'eef hin gargaaru.
Title is: Lakkadhaawwan dhangii lakoofsaa